Kukwira Kwe indasitiri: iyo nzira vhidhiyo mutambo ine yekuvandudza nyowani | Linux Vakapindwa muropa
Kana iwe uchida mazita ezano uye kuvaka kana manejimendi manejimendi, uye iwe zvakare unofarira indasitiri, saka uchave uchida uyu mutambo wevhidhiyo zvakanyanya. Zvakare, izvozvi zvagadziriswa neakakura maLinux ekuvandudza. Iko kukura kukuru kuri kubhadhara kune vatambi vanoda iyi mhando yemutambo. Ndiri pachena kutaura nezvazvo Kubuda kweIndusry, iyo iwe yaunogona kuwana pane webhusaiti yeakakurumbira Valve chitoro chiutsi.
Ichiri muchikamu chekutanga kwazvo chekusimudzira, kodhi yacho haina kana kuomeswa, ndiko kuti, haina kupinda muchikamu cheBeta uko iko kuita kwekuvandudza kwakamiswa uye zvigamba zvinongounzwa kugadzirisa bug dzakaonekwa. Mune ino kesi, Kukwira kweindasitiri kuchiri mune iyo Alpha vhezheni, kunyanya iyo Alpha 9 pamwe nekuvandudzwa kwatinozotaura nezvazvo uye zvine musoro.
Iyo nyowani nyowani inowedzera nyowani maficha sezvazviri kusvibiswa nevamwe vazhinji. Indasitiri yako ikozvino ichatanga kuuraya nyika, chaizvo, saka uchafanirwa kubata neizvi mukugadzirisa maindasitiri aunofanira kuvaka mumutambo wevhidhiyo uyu. Uye zvakare, iyo vhezheni nyowani ine akati wandei nyowani tweaks, yakagadziriswa bugs, Gameplay kugadzirisa, kugadzirisa mashandiro pamwe nekodhi optimizations, uye yakareba etc.
Saka ichi chihombe chiitiko, chichijekesa kuti vagadziri vayo havana simbe uye vanoshanda nesimba kufambisira mberi mutambo. Panguva ino, iwe unogona kutarisa iyo Trailer uye kana uchiifarira, unogona kushanyira vhidhiyo yemitambo zvitoro senge Gogi uye zvakare Steam sezvatakataura pakutanga. Ikoko unogona porbar uyu Alpha uye, kunyangwe pachine nzira refu yekuenda kunotora iyo yekupedzisira vhezheni, iyi vhezheni ichabvisa iyo bug uye isu tichakwanisa kutamba pasina matambudziko akakura pane yedu GNU / Linux distro kubhadhara inonzwisisika huwandu hwemari.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Kukwira Kweindasitiri: iyo nzira vhidhiyo mutambo ine yekuvandudza nyowani
Alex (DPS) akadaro
Mhoroi Isaac, ndatenda nechinyorwa ichi. Ndiri kungoda kujekesa kuti hapana zvakawanda zvasara zverudzi rwekupedzisira. Inenge mwedzi mitatu kana zvakadaro. Tava kutosvika!
Pindura kuna Alex (DPS)